အမြင်သဘောထား Archives - Page3of5- SHAN News (Burmese)
Home အမြင်သဘောထား Page 3
SHAN - November 27, 2021
ခေတ်အဆက်ဆက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ သျှမ်းမြောက် စစ်ရှောင်များ
သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War စတင်နေပြီလား?
တပ်မတော် တကယ် အာဏာသိမ်းနိုင်မလား
ရိုးရာဓလေ့ ကရထုန်းမီးမျောခြင်းနဲ့ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ဆုတ်ယုတ်ခြင်း
Hom Hurng - October 18, 2019 0
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အလျောက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရိုးရာ မီးမျောပွဲတော်နှစ်တိုင်းကျင်းပ ပါတယ်။ လွဲကရထုန်း လို့နာမည်ပေးထားပြီး ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်က ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ ပွဲတော်တခုဖြစ်ပါတယ်။ (လွဲ =...
တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့ သျှမ်းပြည် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ
Nang Seng Nom - September 21, 2019 0
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်း သာမက မြန်မာနိုင်ငံလည်း နှစ်စဉ်...
မြို့ရဲ့ချည်တိုင်ဝိညာဉ်လား ၊ ပြည်ရွာစိတ်ဝိညာဉ်လား သျှမ်းပြည်က မာလိန်တိုင် မိုးနဲမြို့ ၊ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း (ရှေးဟောင်းသမိုင်းရေးရာ)
Hom Hurng - September 10, 2019 0
မာလိန်တိုင်အကြောင်းမပြောခင် မိုးနဲရဲ့နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မိုးနဲမြို့က သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပြီး သျှမ်းပြည်ရဲ့မြို့တော် တောင်ကြီးကနေ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၀၀ အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ မိုးနဲကို BC 441 (သျှမ်းသမိုင်း...
Nang Seng Nom - August 20, 2019 0
တပ်မတော်က မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်ဆင်ရေး အပြင်းအထန် လုပ်လာနိုင်မဲ့ အနေအထားရှိနေ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်က အတွင်းစည်းထိ ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလို့ တပ်မတော်က လည်း ပြန်ပြီး စစ်ဆင်ရေး လုပ်မယ့် အနေအထား...
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေး သျှမ်းအရေးလှုပ်ရှားသူများရဲ့အမြင်
Nang Seng Nom - July 9, 2019 0
ယခုလ ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့့က သျှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ အပါအဝင် တခြားတိုင်း ပြည်နယ်တွေမှာ “Justice for Victoria” ဆိုတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်း...
RCSS ARMY Facebook Page က ဘယ်သူ့ဟာလဲ …..?
SHAN - April 22, 2019 0
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျနော်တို့ သျှမ်းပြည်မှာ သျှမ်းအချင်းချင်းကြားက ပဋိပက္ခတွေကြောင့် သျှမ်းပြည်သားတွေ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ သျှမ်းအမျိုးသားတွေအတွက် လွတ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမယ် လို့ အားလုံးကယုံကြည်အားကိုးခဲ့ရတဲ့ သျှမ်းလက်နက်ကိုင်...
အပစ်ရပ် ၊ အပစ်မရပ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးအပါအဝင် RCSS/SSA ကို အစိုးရတပ်မတော်အထူးသတိပေး
SHAN - January 25, 2019 0
(တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ၀က်ပ်ဆိုက်မှကူးယူဖော်ပြထားသည်) ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် သတိပေးသတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း ၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက နိုင်ငံအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ “ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်...
မိုင်းပန်မြို့က ပအိုဝ်းရွာသားများ ဘာကြောင့် နေရပ်မှစွန့်ခွါ
Hom Hurng - January 9, 2019 0
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်ပန်မြို့မှာ စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့် မိုက်ပုတ်ရွာ၊ ပန်ပိရွာက ဒေသခံရွာသားတွေ နေရပ်ကနေစွန့်ခွါထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ ရွာသားတချို့က သံလွင်အရှေ့ခြမ်း ၀ နယ်ဘက်ကိုသွားရောက် ခိုလှုံ နေကြရပြီး ရွာသားတချို့ကလည်း...
အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ သင့်မြတ်ပါမှ တအိမ်သားလုံး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်မယ်
Hom Hurng - December 10, 2018 0
(သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန တည်ထောင်သူ ၊ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုအင်စတီကျု ဒါရိုက်တာ ဦးခွန်စိုင်း ၏ ၂၁၁၃ သျှမ်းနှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်စကား) အိမ်ထောင်မှုတခုမှာဆိုရင် အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ တို့...
အပစ်ရပ်နှင့် မရပ်သေးသည့်အဖွဲ့ အစိုးရလာရောက်တွေ့ဆုံမှုအပေး PI ဒါရိုက်တာ သုံးသပ်
Hom Hurng - November 20, 2018 0
အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် နဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၊ မရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCSS/SSA ၊ KNU ၊ KNPP နဲ့ KIO...